T Quick oo Xukunkiisa Dib loogu Noqon Doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Yvonne Åsell/Scanpix.
T Quick oo Xukunkiisa Dib loogu Noqon Doono
La cusbooneeyay tisdag 5 juni 2012 kl 11.40
La daabacay tisdag 5 juni 2012 kl 11.18
Xeer-ilaaliye sare Bengt Landahl ayaa maanta u gudbin doona maxkamadda racfaanka dacwad dib loogu qaadayo ee la xiriirta Thomas Quick, oo iminka la baxay Sture Bergwall. Dacwaddaasina ku saabsan tahay dilkii Charles Zelmanovits ee la waayay mar uu ku sugnaa magaalada Piteå sannadkii 1976. Geerida ninkaasi ayaa loo xukmay Quick sannadkii 1994.
- Waxaan gudbin doonaa dacwad quseeysa Sture Bergwall. Fal dembiyeed dil ah ee maxkamadda Piteå ku riday, sida uu sheegay xeer-ilaaliye Bengt Landahl.
Tallaabadan ayaa noqon doonta mid taariikhiya maadaama dacwooyinka noocaaniya ey sida caadiga ah codsadaan qareemmada, halka iminka uu xeer-ilaaliyuhu codsiga u gudbin doono maxkamadda waqooyiga sare, sida uu qoray war-geeyska Norrländska Socialdemokraten.
Wiil 15-jir ah ee lagu magacaabi jirey Charles Zelmanovits ayaa la waayay halka uu cag iyo saan dhigay kadii uu u aaday qoob ka cayaar ka dhici lahaa magaalada Piteå sannadkii 1976. Muddo dabadeed sannadkii 1993 ayaa laga helay meel duur ah ee ku taala Pitholmsleden lafihii wiilkaa. Markaa dabadeed ayuu Thomas Quick qirtay inuu falkaa dilka ah geeystay isagoona farta ku fiiqay ciddii dembiga la gashey oo muddo markaa mootaneeyd. Quick ayaa dembigaa lagu xukumey iyada oo aan haba yaraatee loo heeyn wax caddeeymo ah.
Marka laga yimaado fal-dembiyeedkii lagula kacay Zelmanovits ayuu xeer-ilaaliyuhu muddo toddobaad gudihiis ah sidoo kale soo ban-dhigi doonaa dacwad kale ee uu doonayo in dib loo eego. Dacwaddaasina oo la xiriirta dil dhacay sannadkii 1984 ee loogu magac-daray Dilkii-appojaure. Halkaasina oo laba muwaadin oo holandees ah meeydooda laga helay teendho ey ku sugnaayeen meel ku dhow warta Vuolep Appojaure ee degmada Gällivare. Dacwaddaa ayaa Quick lagu xukmay, kadib isaga oo faahfaahsan uga bixiyay sidii falka uu u dhacey, hase yeeshee aan la hayn wax caddeeyn ah.
Thomas Quick, oo iminka loo yaqaanno Sture Bergwall, ayaa horay looga qaadey saddex dacwadood ee uu ku xukunaa lana xiriirey dil, iyada oo uu islamarkaana dalbaday in qaar kaleetana dib loo furo.